WhatsApp ayaa kuu oggolaan doonta inaad daawato isjiidka 'Netflix' adigoon ka bixin dalabka | Androidsis
Muddo ka hor WhatsApp ayaa soo bandhigtay suurtagalnimada daawo fiidiyowyada YouTube-ka iyadoo aan laga bixin arjiga. Hawl xiiso leh, oo aan ku sameyn karno fiidiyowyada sidoo kale bogagga sida Instagram ama Facebook. Hawshan hadda waa la ballaariyay iyadoo ay suurtagal tahay daawo isjiidka Netflix adigoon ka bixin barnaamijka dirista.
Xilligan waa wax ay isticmaaleyaasha ku shaqeeya iOS ay ku raaxeysan karaan hadda. Waxaa la filayaa inay sidoo kale suurta gal ka noqon doonto Android waxyar. Marka si aan u aragno xiriiriye ka kooban Netflix trailer toos ah WhatsApp, iyada oo aan laga tagin dalabka caanka ah.
Haddii qofku u diro xiriiriye wadahadal WhatsApp, halkaas oo aan ka helno trailer ah taxanaha Netflix ama filim, Waan arki karnaa trailer-ka su'aasha laga qabo waxyaabaha la sheegay iyadoo aan laga tegin wadahadalkan. Hab lagu kobciyo wada sheekaysiga ku jira arjiga, waa sidan sida hawshan loogu dhawaaqay.
Sidaan soo sheegnay, shaqadan waxaa loo bilaabay meesha ugu horeysa kuwa u isticmaal barnaamijkan macruufka. Waxba lagama sheegin dadka isticmaala Android. In kasta oo ay tahay in loo maleeyo in shaqadani sidoo kale ay noqon doonto mid loogu talagalay Android, laakiin waa inaan in yar sugno.
Xilligan waxaan arki karnaa fiidiyowyada YouTube, Facebook, Instagram iyo caan adoon ka tagin WhatsApp. Afartaan codsi waxaan ku darsaneynaa Netflix hada, si aan u aragno sida suurtagalnimada ah ee ah daawashada fiidiyowyadan wadahadalka laftiisa ay u sii kordheyso, soo dhaweyn wanaagsan sidoo kale dadka isticmaala.
Waxaan u noqon doonnaa feejignaan taariikhda shaqadani waxay gaadhay WhatsApp-ka Android. Ma ahan in waqti dheer la qaato haddii si rasmi ah loogu sii daayo macruufka, laakiin kala duwanaanshaha ayaa badanaa la arkaa mararka qaarkood. Marka waxaan sugeynaa arjiga laftiisa inuu ku dhawaaqo muuqaalkan waqti yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » WhatsApp ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku ciyaartid isjiidka Netflix adigoon ka bixin barnaamijka